सन्तानै संगीतमा- अन्य - कान्तिपुर समाचार
माघ १०, २०७६ गोपाल दाहाल
सृजन नेपाल, रोशन शर्मा र प्रशान्त शर्मा सहोदर दाजुभाइ हुन्  । उनीहरूको परिवार मात्र होइन, रुचिको क्षेत्र पनि एउटै हो, संगीत  ।
सृजन राम्रा गायक, संगीतकार, गितारिस्ट, रेकर्डिस्ट र एरेन्जरका रूपमा परिचित छन् । रोशन नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि परिचय बनाइरहेका मोहन बिना वादक हुन् । उनका नेपाल, दुबई र पाकिस्तानमा ब्यान्डहरू छन् । प्रशान्त पूर्व क्षेत्रमा निकै सक्रिय रहेका धरानका गायक हुन् ।
उनीहरूको पारिवारिक माहोल नै संगीतमय थियो । उसबेला उनीहरूका बुबा कवि तथा गायक मञ्जुल र आमा कवि कुन्ता शर्मा, रामेश श्रेष्ठहरूसँगै साहित्य र संगीतमार्फत जनता जगाउन हिँड्थे । पारिवारिक झमेलाका कारण सृजन बुबा मञ्जुलसँगै काठमाडौं बस्न थाले । भाइहरू रोशन र प्रशान्त आमा कुन्तासँगै धरान बस्थे । दाजुभाइ टाढा भए पनि तीनै जनाको रुचिको विषय एउटै बन्यो– संगीत ।
सानैदेखि सांगीतिक कार्यक्रममा गाउन थालेका सृजनले २०४८ सालमै रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेका थिए । त्यसपछि रेडियो नेपालमा ‘म सानो झरी हुँ’ लगायत चार वटा गीत रेकर्ड गराए ।
नेपाल घुम्न आएका अमेरिकन नागरिक जोन डेनासँग गितार सिकेर निरन्तर अभ्यास गरेपछि सृजन स्टुडियोहरूमा कन्टेम्पोररी र रक शैलीका गीतमा गितार बजाउन थाले । उनले नवीन के भट्टराईको त्यसताका चर्चित बनेका गीत ‘यही हो त माया’, प्राश्ना शाक्यको ‘आवाज देऊ’ लगायत धेरै गीतमा गितार बजाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा गाउने र बजाउने दुवै गर्थें तर बजाउँदा पैसा पाइने भएकाले यतातिर लागें ।’
सृजनले म्युजिक एरेन्जर र गितारिस्टको काम पनि गरे । सृजनसँगै ब्रुनो (जय मल्ल), डा. सुमनशमशेर थापा, डेनमार्कका नागरिक एक्सेल र पिटर अनि जापानिज योशी मिलेर ‘बाइपास’ ब्यान्ड स्थापना गरे । ब्यान्डमा सृजन भोकलिस्ट, गितारिस्ट र कम्पोजर थिए । ब्यान्डकै नाममा एल्बम पनि निकाले । सन् १९९६ मा देशभरका छानिएका १२ गायकहरूको स्वर समेटिएको एल्बम ‘स्टार सेन्सेसन’ निस्कियो । त्यसमा सृजनको स्वर पनि थियो । सृजन धरान फर्किएपछि धरानका गायकहरूको संयुक्त एल्बम ‘भ्वाइसेस धरान’ निस्कियो । त्यसमा सृजनले गाएका थिए भने उनका भाइ रोशनले कम्पोज गरेका थिए ।
उनी धरान फर्किएर ‘धरान रेकर्डिङ स्टुडियो’ पनि खोले । स्टुडियोमा करिब १५ सय गीत रेकर्ड भएका छन् । उनकै स्टुडियोमा कान्छा भाइ प्रशान्तको गीत ‘पन्छी...’ रेकर्ड भयो । सन् २००० मा पुरानो ब्यान्ड बाइपासका तीन नेपाली सदस्यहरू मिलेर ‘बाइपास २’ एल्बम पनि निकाले । उनले एकल गीतहरू पनि गाए । अहिले घरमै एरेन्ज गर्ने, गितार सिकाउने गर्दै आएका उनी भन्छन्, ‘जे जे गरे पनि फुलटाइम संगीत नै हो ।’
सृजनका माइला भाइ रोशनले सृजनसँगै गितार बजाउन सिके । उनी पनि एसएलसीपछि २०५१ सालदेखि ब्यान्ड बनाएर संगीतमै लागेका थिए । रोशनले शिव लामिछानेहरूसँग मिलेर स्थापना गरेको ब्यान्ड ‘द अर्थ’ थियो । त्यसमा उनी गितार बजाउँथे । भिकल्स ब्यान्डमा पनि उनको भूमिका गितारमै थियो । उनले स्थानीय रेस्टुराँहरूमा पनि बजाए । त्यसपछि काठमाडौं पुगेका रोशनले स्टुडियो म्युजिसियनका रूपमा लामो समय काम गरे । काठमाडौं ज्याज कन्जरभेटरी (केजेसी) मा पनि केही वर्ष गितार सिकाए । संगीतकै लागि ब्याडहरूसँग विदेश पनि पुगे ।
ग्रामी अवार्ड विजेता पण्डित विश्वमोहन भट्टसँग उनैले बनाएको बाजा मोहन बिना सिकेका ४१ वर्षीय रोशन अहिले यही बाजाबाट स्वदेशमा नाम कमाइरहेका छन् । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा मोहन बिना बजाउने रोशन एक्ला हुन् । अहिले उनले धेरैलाई यो बाजा सिकाइरहेका छन् । रजिना रिमाल र मनोज राजले गाएको गीत ‘पानीको फोका’, सुरज थापाको गीत ‘बहुला’ लगायत धेरै गीतमा मोहन बिनाको धुन सुन्न सकिन्छ ।
रोशन नेपालमा ‘ऊर्जा नेपाल’ ब्यान्डमा आबद्ध छन् भने दुबईमा नेपाली र भारतीयसँग मिलेर ‘काव्या’ का लागि बजाउँछन् । उनले पाकिस्तानको चर्चित ब्यान्ड ‘स्केचेस’ मा पनि आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको यो ब्यान्डले पाकिस्तानी फिल्म ‘केक’ मा दिएको संगीत ओस्कार अवार्डको मनोनयनमा परेको थियो । अहिले उनी विदेशमा रहेका ब्यान्डहरूका कतिपय काम घरमै बसेर गर्छन् । आवश्यक पर्दा बजाउन विदेश पुग्छन् । पछिल्लो समय धरानमै बसेर साधनारत रोशन भन्छन्, ‘काठमाडौंमा कमाइ राम्रो थियो तर मलाई कमाइभन्दा पनि मैले राम्रो बजाएँ कि बजाइनँ भन्नेमा चिन्ता लाग्न थाल्यो । आत्मसन्तुष्टि भएन, त्यसपछि धरान फर्किएँ ।’
३७ वर्षीय कान्छा प्रशान्त मामा घर पुग्दा किशोरकुमारका गीतहरू खुब सुन्थे । ४५ वर्षीय सृजन धरान आएपछि प्रशान्तले उनीबाटै विभिन्न गायकका गीतहरू सुने । उनलाई पनि गितार बजाउन मन लाग्यो । पछि दुवै दाजुहरूसँग अलिअलि गर्दै बजाउन सिके । एसएलसीपछि उनी काठमाडौं गए । अनामनगरमा उनको सांगीतिक सर्कल बन्यो । त्यहीँका साथीहरूसँग मिलेर भूमि ब्यान्ड स्थापना गरे । २०५६–५७ सालतिर उनले त्यही ब्यान्डमार्फत ‘तिम्रो मायाको सागरमा’ गीत पनि रेकर्ड गराए । ब्यान्ड लोकप्रिय बनिरहेको थियो । उनी लागूऔषधमा फसे ।
लागूऔषधबाट बाहिर निस्किन प्रशान्तलाई निकै समय लाग्यो । लागूऔषधमुक्त बनेपछि उनी पुनः संगीतमै फर्किए । उनले डिसेवल, जंगे लगायत विभिन्न ब्यान्डसँग मिलेर काम गरे । २०७० सालदेखि उनी धरानकै द आउटसाइडर ब्यान्डमा आबद्ध भए । उनले पहिला गाएको गीत ‘पन्छी’ ब्यान्डकै गीत बनाएर गाए । चार वर्षपछि ब्यान्ड छाडेका उनले आफ्नै माइला दाजु रोशनसँग
मिलेर ऊर्जा नेपाल ब्यान्डसँग पनि काम गरिरहेका छन् । उनी गिरीश खतिवडा, गंगा वरदान लगायतसँग मिलेर पनि गीतहरू गरिरहेका छन् ।
तीनै जना दाजुभाइ संगीत क्षेत्रमा हुँदा आफूलाई धेरै सजिलो भएको बताउँछन् प्रशान्त । उनी सन्तानै संगीतमा लाग्नुलाई आमाको महत्त्वपूर्ण देन मान्छन् । ‘आमा क्लासिकल गीतहरू अहिले पनि रातभर सुन्नु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सानोमा हामीले बरु खान राम्रो पाइनौं होला तर आमाले दाजुहरूलाई महँगो गितार किनिदिनुहुन्थ्यो । अहिले पनि भिडियो गर्न आमाले सहयोग गर्नु हुन्छ ।’
धरानमै बसेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै र विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका प्रशान्त यहीँ बसेर आफ्नो पहिचान बनाउन लागिरहेका छन् । ‘पहिला पो मिडियादेखि स्टुडियोसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीकृत थिएँ र जानुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा बस्ने सबै कलाकार हिट भएका छैनन् । बाहिरै बस्नेले पनि राम्रो गरिरहेका छन् ।’
प्रकाशित : माघ १०, २०७६ १२:४८
आन्दोलनरत विद्यार्थीको पक्षमा उभिएकै कारण संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुक भारतमा एउटी हिरोइनमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ ।
माघ १०, २०७६
छपाक’ रिलिजको दुई दिन अगाडि दीपिका पादुकोण दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) पुगिन्  । खतराको घन्टी त्यतिबेलै बज्न थालिसकेको थियो  ।
जेएनयू पुगेर भाषण गरिनन्, सिर्फ घाइते विद्यार्थी नेता आयशी घोषलाई भेटिन्, उनको स्वास्थ्यबारे सोधखोज गर्दै ढाडस दिइन्, केही मिनेट विद्यार्थीहरूको विरोधसभामा सहभागी भइन् र चुपचाप फर्किन् । तर उनीविरुद्ध निसाना साध्न सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का भक्तलाई यत्ति नै काफी भयो ।
दीपिका जेएनयूबाट निस्किनासाथ सामाजिक सञ्जालमा ‘बाइकट छपाक’ अभियान नै सुरु भयो, बुकिङ टिकट धमाधम क्यान्सिल गरियो, पैसा तिरेर किनिसकेको टिकटसमेत च्यातेर फेसबुकतिर ‘भाइरल’ बनाइयो । अनि च्याप्न थालियो, ‘छपाक’ सँगै रिलिज भएको ‘तानाजी’ लाई ।
हिन्दु राजा छत्रपति शिवाजी र मराठ राज्य जोगाउन बलिदानी दिएका योद्धा तानाजीको महिमा गाइएको फिल्म भाजपाका समर्थकलाई मनपर्ने भइहाल्यो । तर आन्दोलनरत विद्यार्थीको पक्षमा उभिएकै भरमा दीपिकाप्रति प्रतिशोध लिएर संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकमा असहिष्णुताको हद कुन विन्दुसम्म पुगेको छ भन्ने प्रस्टै देखियो । दीपिका यो प्रवृत्तिको सिकार भएकी पछिल्लो पात्रमात्र हुन् ।
जबकि ‘छपाक’ मा भारतीय समाजको अँध्यारो तर यथार्थ नियतिलाई उजागर गरिएको छ । त्यो हो, युवतीमाथि हुने एसिड प्रहार । सन् २००५ मा दिल्लीमा लक्ष्मी अग्रवाल एसिड आक्रमणमा परेकी थिइन् । त्यति बेला उनी १६ वर्षकी मात्र थिइन् तर पनि हरेस खाइनन्, अपराधीलाई सजाय दिलाउन र एसिड नियमन गर्न कानुनी लडाइँ लडिरहिन् । आज भारतमात्र होइन, संसारभर लक्ष्मी प्रेरणाकी पात्र भएकी छन् । ‘छपाक’ उनै साहसी लक्ष्मीको कथा हो । लक्ष्मी बनेकी छन्, दीपिका । यसरी दीपिकाको चरित्र संवेदनशील छ नै, अभिनय पनि जीवन्त छ । तर ‘छपाक’ बक्सअफिसमा फ्लप भयो ।
७२औं कान्स फिल्म फेस्टिभलका अवसरमा फोटोग्राफरसामु तस्बिर खिचाउँदै दीपिका पादुकोण तस्बिर : रोयटर्स
कोइमोई डटकमका अनुसार ‘छपाक’ को घरेलु बजारको कलेक्सन रिलिजको पहिलो साता भारु २८ करोडमा सीमित भयो । यही अवधिमा ‘तानाजी’ ले भारु १ सय २८ करोडको व्यापार गर्‍यो । दोस्रो साताको कमाइमा पनि ‘तानाजी’ नै अगाडि छ ।
महिला सशक्तीकरणको अभियान हो, ‘छपाक’ । राज्य संरचना, प्रहरी प्रशासन र समाजका अन्य तप्का हिंसापीडित महिलाप्रति कति अनुदार छ भन्ने दृष्टान्त हो, ‘छपाक’ । अनेक शारीरिक र मानसिक सास्ती सामना गरेर आफूमाथिको अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउने युवतीको आत्मविश्वासको प्रतिबिम्ब हो, ‘छपाक’ । निःसन्देह यसले कर छुटलगायत अन्य सरकारी सुविधाको हक राख्छ तर केन्द्र सरकारकै अघोषित निषेध र बहिष्कार बेहोर्नुपर्‍यो । कांग्रेसको सरकार भएका दुई राज्य मध्यप्रदेश र राजस्थानमा मात्र कर छुट भयो ।
भाजपाले शासन गरिरहेको हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा चाहिँ ‘तानाजी’ को कर छुटको घोषणा गरियो, जबकि यी सबै राज्य महिला हिंसाको रेकर्डमा अगाडि आउँछन् । बक्सअफिसमा असफल बनाउन त ‘छपाक’ र दीपिकामाथि आक्रमण भयो नै । व्यावसायिक उत्पादनको विज्ञापनबाट समेत उनलाई किनाराकृत गर्न थालिएको छ । असहिष्णुताबारे बोलेपछि कुनै समय शाहरुख खान र आमिर खान यसरी पिल्सिनुपरेको थियो । कतिसम्म भने, इन्टरनेट मुभी डाटाबेस (आईएमडीबी) मा ‘छपाक’ को रेटिङ घटाउनसमेत भाजपाभक्तहरू लागिपरे । कति दूषित हर्कत !
‘छपाक’ की हिरोइनमात्र होइनन्, दीपिका । निर्माता पनि हुन्, त्यसैले फ्लप हुँदा दोहोरो मारमा परेकी छन् । उनीमाथि यस्तो अन्याय पर्दासमेत बलिउडका ठूला नामहरू कोही बोलेनन्, न त दीपिका स्वयंले कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘पद्मावत’ खेलेपछि पनि हिन्दु अतिवादीबाट हमला सहनुपरेको थियो उनले । तर ‘छपाक’ ले आमदर्शकमा भने उनको साख वृद्धिमा भूमिका खेलेको छ । यति संवेदनशील विषयमा आफ्नै लगानीमा फिल्म बनाएर आफैं खेल्नु चानचुने आँट हो र ?
प्रकाशित : माघ १०, २०७६ १२:४६
थप केही अन्यबाट
गायक ढुंगानाको 'बाबा' बोलको गीत सार्वजनिक
कांग्रेसका ९ भ्रातृ संस्थाको म्याद थप
बेलायतबाट सिटीको कारोबार
सगुनको दोस्रो सेयर निष्कासन
हङकङको केएमई रेमिट्यान्स र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबीच रेमिटान्स कारोबार सुरु
फोटो पत्रकारलाई मास्क र स्यानिटाइजर सहयोग
सर्वेसर्वाका अविवेकी गतिविधि
सीके लाल मंसिर १४, २०७८
परिस्थितिजन्य अनिवार्यता जनाउन हिन्दी भाषामा एउटा चल्तीको उक्ति छ— ‘वृन्दावन में रहना है तो राधे–राधे कहना है ।’ त्यस कथनलाई अलिकति संशोधन गर्ने हो भने...
दुर्गा खनाल मंसिर १४, २०७८
झन्डै ५ दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेका केपी शर्मा ओलीको भूमिका पार्टीभित्र लामो समय बागी जस्तो थियो । विपक्षी कित्तामा बसेर झन्डै चार दशक बिताएका ओलीको...
रोजगार गन्तव्य मुलुकमा अविलम्ब राजदूत तोक
सम्पादकीय मंसिर १४, २०७८
सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये ११ जनालाई फिर्ता बोलाएको दुई महिना बितिसकेको छ । राजनीतिक कोटाका आधारमा नियुक्त गरिएकाहरू फिर्ता बोलाइएयता भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि...
यो गणराज्यको जात के हो ?
राजेन्द्र महर्जन मंसिर १४, २०७८
फेरि पनितिम्रो जुलुसमाबज्नेछनवराजको छालाको दमाहारातो कार्पेटबनेर बगेको छ भेरीतिमी भेरी हुँदै आउनू ।– केवल बिनाबी/तिमी भेरी हुँदै आउनू
पढाइ र गृहकार्यले थिचिँदै बालबालिका
साधना प्रतीक्षा मंसिर १४, २०७८
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि व्यावहारिक बन्न नसकेको हाम्रो शिक्षा पद्धतिका कारण बालबालिका एकातिर किताब–कापीको गह्रौं भारीले थिचिएका छन् भने, अर्कातिर गृहकार्यको बोझले किचिएका छन् । विशेष गरी...
न्यायालयको भाँडभैलोको निकास
गौरीबहादुर कार्की मंसिर १३, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमनका लागि नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पेसागत संगठनहरू, नागरिक समाज, सहकर्मी न्यायाधीशहरूको व्यापक विरोध जारी छ; आन्दोलन चर्किरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमै...
झन्‌झन् गहिरिँदो महँगीको जरो
हरि रोका मंसिर १३, २०७८
हरेक वर्ष दसैंमा महँगी बढ्ने गर्छ । तर यसपालिको दसैंमा बढेको महँगीले सामान्य जनताको झन् धेरै ढाड सेक्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर लागेपछि देशको वर्तमान आर्थिक...
पूर्ण खोप प्राप्त ८४,३७,८६०
अपडेटः मंगलबार, १४ मंसिर, २०७८ । १८ : ०९ बजे